Tezvara vakandibvisa kaskirt nepant apa beche rainge ratota kare, vakarinyudza zimboro nehukasha! - Masasi eHarare
DzeBonde Tezvara vakandibvisa kaskirt nepant apa beche rainge ratota kare, vakarinyudza zimboro nehukasha!
Tezvara vakandibvisa kaskirt nepant apa beche rainge ratota kare, vakarinyudza zimboro nehukasha!
Kubva mazuva zvinhu azachinja munyika yedu yeZimbabwe vanhu vakawanda vakamhanyira Joni kunotsvaga mabasa asi mukuita izvi zvakanganisa dzimba dzakawanda.
Murume wangu akaenda kunotsvaga mari Joni ndokupedza makore 5 asina kana kumbodzoka. Aingofona nenguva dzirikure plus hapana mari yaaitumira kuti ini mukadzi wake nemwana tirarame kumusha kwataigara. Ndakazoyedza kutengesawo madomasi pa road kuti ndiraramise mhuri asi munhu wese akutengesa saka taiwana zvekudya chete. Tezvara vangu vaishandira Harare uye vachigara imba yavo yavakavaka. Mudzimai wavo, vamwene vangu vainge vashaya 3 years back and mwana wavo haana kana kuuya kuzowona mai vake vachivingwa ndipo pandakaziva kuti ndakaroorwa neboora ngoma.
Tezvara vangu ndovaitopota vachinditumira mari yechikafu nekutenga zvekupfeka murume wangu achonera Joni. Nhamo huru yandaive ndave nayo ndeye kudawo kusvirwa 5 years dzakawanda iwe masasi usina kumbosvirwa. Pachimiro ndiri mukadzi anoyemurika zvekuti pandinofamba ndinotombonyengwa nevakomana, I look younger than my age. Mazamu angu achakamira kuti twii semhandara. Tezvara vangu vakazondifonera kuti ndiuye Harare kuzotora mari yainzi yatumirwa nemurume wangu. Ndakaenda nemufaro asi ndakazosuwa vandiudza kuti hapana mari yainge yatumirwa naLucky asi kuti vainge vandiwanira basa rekuita receptionist pane imwe kambani.
Mwana ndakamusiya kwatete vake. Ndakatanga basa zvakanaka uye ndaigara natezvara vangu ava paimba yavo. One day ndaive zvangu off ndokumuka kuti ndigeze. Ndakamuka ndichiimbirira zvangu handaiziva kuti tezvara vainge vasinawo kuenda kubasa. Ndakapfeka zvangu kamini skirt ko ndainge ndakushanda apa kaiburitsa zvidya zvese, ko ndaiti ndiri ndega pamba. Tezvara vaiona zvese vachidongorera nepawindow remubedroom mavo. Ndakazopinda mubathroom ndokutanga kuita kuzvibata ndichikwiza kabhinzi uku ndichichemerera. Tezvara vangu vakandinzwira tsitsi, pandakabuda mubath vakandideedza mubedroom mavo.
Ndakarohwa nehana kuziva kuti vainge varipo uye nyadzi dzakandibata. Ndakapinda mumba mavo ndokutanga kutarisa pasi “muroora ndinonzwisisa chaizvo situation yako, asi ndinofara kuti hauna kuda kuita zvechihure asi unotambisa nhengo yako kuti zviite, nhamo yako ndiyo yanguwo kubva zvakafa amwene vako” apa vakabva vandibata pabendekete chaipo ndikabva ndatoziva kuti pano ndatosvirwa but ndainge ndisina basa nazvo nekuti ndaidawo kumbosvirwa. Mboro yatezvara yainge yamira vachiona zvidya zvaibudikira muka mini-skirt kangu. Ndakatanga kubatwa mazamu uye handina kuita nharo. Ndainge ndakunzwawo kuda kusvirwa ini.
Tezvara vakandibvisa ka skirt kaye nepant ndokundirarisa nemusana. Mazamu akatanga kuyamwiwa zvainakidza. Ndakabva ndatota beche rese uye ndainge ndakuda kusvirwa zvakaipa. Pavakabvisa pant ravo vachikwira pamusoro ndakavhura ndega makumbo angu. Ko ndainge ndagarisazve pasina kumbosvirwa. Vakarinyudza zimboro nehukasha tezvara rikaperera rese. Pandakangovabata muchiuno ndichikoira ndakanzwa tsaaaa tsaaaa tsaaaa vachitundira mukati, shasha yanga yagarisa zveshuwa ini ndakaramba ndichikoira ndobva ndatotundawo pavakaramba vachiyamwa mazamu angu.
Tezvara vakandibvisa kaskirt nepant